China hazie Clear TPU Rain Cover maka Akpa Manufacturer na Supplier | Ruo mgbe ebighi ebi
nlereanya Mba LD-HC16
aha: Akpa mmiri ozuzo n'echebe
nwunye: TPU ịkwanyere EVA Polyester
size: Isi: 45 * 32 cm ma ọ bụ ahaziri ya
agba: odo / uzo / green / acha anụnụ anụnụ / pink / ọcha ma ọ bụ ahaziri ike ibipụta logo ma ọ bụ ụkpụrụ
mbukota: 1pc / polybag; 100pcs / katọn
nwere ike iburu dị ka ndị ahịa 'arịrịọ.
atụmatụ: waterproof, n'èzí, fashionable
1.Hangdag mmiri ozuzo na-echebe aka na-adịghị anya site na mmiri ozuzo na uzuzu
A na-akwakọba mkpuchi mmiri ozuzo ọ bụla Hangdag maka ichebe ndị mmadụ n'ụzọ dị mfe.
3.P zuru oke maka ịzụ ahịa, ntụrụndụ, ogige ntụrụndụ, ememme egwu
4. waterproof, packable na fechaa dabara gị Akpa ma ọ bụ obere akpa.
5. lightweight, kọmpat, na ezigbo mkpuchi.
6. adabara ogologo oge. tinye na obere akpa mgbe ị na-ejighi ya
7.Fit ọma na onye ọrụ ike gbatịa ya / ya akpa size.
8.We na-emepụta ma hazie ụdị akpa aka mmiri ozuzo ndị ọzọ dịka ịchọrọ.
9.We ike ibipụta logo (6 agba, 1 mita max) izute gị mkpa.
Nke gara aga: 2020 N'ogbe price Pu jaket - Hazie Clear TPU Rain Cover maka Akpa - Ruo Mgbe Bright
Osote: Reusable PEVA Rain Ponchos na Akara Akara Akara
Nwanyị akpa mmiri ozuzo
Ladies Akpa Rain Ekpuchi
New Style Piel Ladys Akpa Rain Rain
Full-ebi akwụkwọ fechaa polyester waterproof ...
Pumụaka Pu Raincoat, Peva Raincoat, Comụ nwanyị na-ekpuchi mmiri ozuzo, Pvc Raincoat, Ịkwanyere Poncho, Pu Raincoat,